ဖလား ယူတဲ့ လီဗာပူး ၊ ၂ ခါ မမှားတဲ့ နာပိုလီ ၊ လာလီဂါ ရဲ့ စံချိန်ရှင် လူငယ်လေး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဖလား ယူတဲ့ လီဗာပူး ၊ ၂ ခါ မမှားတဲ့ နာပိုလီ ၊ လာလီဂါ ရဲ့ စံချိန်ရှင် လူငယ်လေး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
February 28, 2022 February 28, 2022 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ဝင်ဘာလေ ကွင်းကြီးထဲမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ရဲ့ ခါရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ မှာတော့ လီဗာပူး ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် နဲ့ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်စွဲ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဂိုးမရှိ သရေကျ ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာ တဘက်ကို ပင်နယ်တီ ၁၁ ကြိမ်စီ အထိ ကန်ခဲ့ရပြီး ချဲလ်ဆီး ဂိုးသမား ကီပါ ရဲ့ ပင်နယ်တီ လွဲချော်မှုကြောင့် လီဗာပူး တို့ အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဟာ လီဗာပူး အတွက် ၉ ကြိမ်မြောက် ခါရာဘောင် ဖလား ချန်ပီယံ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး အအောင်မြင်ဆုံး အသင်း နေရာကို တသင်းတည်းပိုင် ပြန်လည် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် မှာတော့ ဝက်စ်ဟမ်း ဟာ ဝုဗ် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၄ တိုက်ပွဲထဲကို ပြန်လည် ဝင်ရောက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တုန်းက မီလန် ၂ သင်း အမှတ်လျော့မှုကို အခွင့်ကောင်း မယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီတပတ် မှာတော့ နာပိုလီ ဟာ လာဇီယို အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၁ နေရာကို တက်လှမ်း လာခဲ့ပါတယ် ။
လာလီဂါ မှာတော့ ဘာစီလိုနာ ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဘီဘာအို အသင်းကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၃ က ရီးရဲ ဘက်တစ် နဲ့ ၁ မှတ်အကွာ အထိ ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အတွက် ဂိုးမြူးနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး အော်ဘားမီးယန်း က ၁ ဂိုး သွင်းပေးခဲ့သလို လူစားဝင် လာတဲ့ ဒမ်ဘီလီ ကလည်း ၂ ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့က လာလီဂါ ရဲ့ ထူးခြား အံ့ဖွယ် ကတော့ ဗီလာရီးရဲ အသင်းရဲ့ ၁၉ နှစ် အရွယ် ကစားသမားလေး ယီရီမီ ပီနို ပါပဲ ။ ပီနို ဟာ မနေ့ ညကပွဲမှာ ဗီလာရီးရဲ အတွက် တယောက်တည်း ၄ ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး လာလီဂါ သမိုင်းမှာ အသက် အငယ်ဆုံး တပွဲတည်း ၄ ဂိုးရှင် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို အသက် အငယ်ဆုံး ပထမပိုင်း ဟက်ထရစ်ရှင်လည်း ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
လိဒ် ယူနိုက်တက် ဟာ နည်းပြကြီး မာဆယ်လို ဘီယေဆာ ကို ထုတ်ပယ်ကြောင်း ယမန်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက တရားဝင် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘီယေဆာ ဟာ လိဒ် ကို ၃ နှစ်ခွဲ ကိုင်တွယ် ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ပြန်လည် တန်းတက် လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
လိဒ် ကစားသမားတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ နည်းပြကြီး အတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခဲ့ ကြတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ဟာ ရုရှ ရဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုရှ လက်ရွေးစင် အသင်းကို လာမယ့် ပွဲစဉ်တွေက စပြီး ကြားကွင်းတွေမှာ သွားရောက် ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ပွဲတွေမှာ ရုရှ အသင်း ဟာ ရုရှ ဘောလုံး ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ အမည်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြု ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး အသင်းတံဆိပ် ၊ အသင်း ပရိသတ်တွေ နဲ့ ရုရှ နိုင်ငံတော် သီချင်းတွေကို ထည့်သွင်းခွင့် ရရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ပိုလန် ၊ ယူကရိန်း နဲ့ ဆွီဒင် တို့ကတော့ သူတို့ နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ Play-off လမ်းကြောင်း တခုတည်း အတူ ကျရောက်နေတဲ့ ရုရှ အသင်းနဲ့ ကစားဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ထားကြပါတယ် ။
နိုင်ငံတကာ ဂျုဒို အဖွဲ့ချုပ် ကလည်း ရုရှ အကြီးအကဲ ဗလာဒီမာ ပူတင် ကို သူတို့ ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥက္ကဌ နဲ့ သံတမန် အဖြစ်ကနေ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်တယ်လို့ ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘရာဇီး ပြည်တွင်း ဒါဘီ ပွဲစဉ် တခု ဖြစ်တဲ့ အင်တာနယ်စီယွန်နယ် နဲ့ ဂရီမီယို အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ် ကတော့ ဂရီမီယို အသင်းရဲ့ ဘတ်စ်ကား ကို အင်တာနယ်စီယွန်နယ် ပရိသတ်တွေ က တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် ပွဲရွှေ့ဆိုင်း ခဲ့ရပါတယ် ။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ဂရီမီယို အသင်းဘက်က တဦးဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပြီး ဆေးရုံကို အမြန်ပို့ဆောင် ကုသခဲ့ရတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်းဟာ ဒေါ့မွန် တိုက်စစ်မှူးလေး အာလင်း ဟာလန်း ကို နွေရာသီမှာ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ ရေပန်း စားနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဖရန့် လီဘော့ဖ် က ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ၃၇ နှစ် အချိန်အထိ စံပြုရ လောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကို လုပ်ပြ နေနိုင်သူ အဖြစ် ချီးကျူး ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ပေါ်တူဂီသားကြီး အနေနဲ့ အဆိုးဘက်ယိမ်းတဲ့ မှတ်ချက်တွေ များပြား မလာခင်မှာ အနားယူလိုက်သင့်တယ်လို့ အကြံပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဘာတွေ ပြောထားလဲဆိုတာ ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ ရန်းဂနစ်
Previous Article ကလော့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် သံသယ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ အရူးလို့ ပြောလိုက်ပြီး ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်က လီဗာပူးစတားတစ်ဦးရဲ့ ခြေစွမ်းကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
Next Article ‘ အပြစ်တင်ချင်ရင် ကျွန်တော့ကိုပဲ အပြစ်တင်ပါ ‘ – အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီ လွဲခဲ့တဲ့ ကီပါဖက်မှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့ တူချယ်